Okporo ụzọ ọnụ ụzọ China Manufacturers & Suppliers & Factory
Okporo ụzọ ọnụ ụzọ - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Okporo ụzọ ọnụ ụzọ)
PVC Roller Shutter Speed ​​Door E nergy-ịzọpụta: Ọnụ ụzọ chekwaa ike site na akụkụ abụọ, na mbụ, ihe nchọpụta a na-emeghe / mechiri emechi na imechi ihe nkedo na-eme ka oge nkwụsị na mmechi dị mkpụmkpụ, n'ihi na ọnụ ụzọ nke ụlọ ọrụ nchịkọta nri, na-ebelata mmeghe nke mmeghe na mmechi nwere ike belata ọnwụ , si otú...
Atụmatụ nke Aluminom siri ike ngwa ngwa tụgharịa ọnụ ụzọ
Ụkpụrụ ahịa ụlọ ọrụ ahụ nwere ike izute ma ọ bụ gafere ihe ndị onye ahịa chọrọ iji rụọ ọrụ ọnụ ụzọ dị ike nke aluminom : ※ Ọsọ ọsọ: Oghere okporo ụzọ nke ọnụ ụzọ dị ike na-eme ka ọganihu nke ahụ ụzọ ahụ dị ngwa, na-eme ka ọnụ ụzọ ahụ ghara ịdị jụụ ma na-adịwanye elu na-arụ ọrụ dị elu. Ọnụ ọsọ nwere ike iru 1000 ~...
Onye na-ere ahịa ọkpụkpụ na-akwụ ụgwọ n'ọdụ ụgbọ mmiri
Onye na-ere ahịa ọkpụkpụ na-akwụ ụgwọ n'ọdụ ụgbọ mmiri Ọnụ ụzọ na-ekpo ọkụ eletriki eletrik nwere ọtụtụ narị pvc ọnụ ụzọ na-esi na tube ígwè. O nwere uru nke nghọta, mgbochi, mgbochi mmiri ozuzo, ájá na ájá. A na-ejikarị ọnụ ụzọ kpuchiri ọnụ ụzọ kpuchie ọnụ ahịa na nnukwu ụlọ ahịa. Ha dịkwa mma maka ọnụ ụzọ imeghe...
Ọnụ Ụzọ PVC Dị Elu nke Elu
Ọnụ Ụzọ PVC Dị Elu nke Elu Rapid PVC door Grey, Yellow grid, Purple, Green, Light green, Black, Perforated Yellow grid, White, Blue, White grid, Sky Blue, Yellow, Orange, Red Color curtain: 0.8 mm thickness.
Ọfụfụ Ịgba Ọkụ Ikuku na-ere ahịa na-agbagharị n'Ọnụ Ụzọ
Ọfụfụ Ịgba Ọkụ Ikuku na-ere ahịa na-agbagharị n'Ọnụ Ụzọ Ọnụ ụzọ na-ekpo ọkụ eletriki eletrik nwere ọtụtụ narị pvc ọnụ ụzọ na-esi na tube ígwè. O nwere uru nke nghọta, mgbochi, mgbochi mmiri ozuzo, ájá na ájá. A na-ejikarị ọnụ ụzọ kpuchiri ọnụ ụzọ kpuchie ọnụ ahịa na nnukwu ụlọ ahịa. Ha dịkwa mma maka ọnụ ụzọ...
Ogwe Ụlọ Ahulu nke Turbine Ọfụma Nchebe Na-ahụ Maka Ngwá Agha
Okpokoro Vertical PC Transparent Okporo Ụzọ Ịgba Ọkụ
Okpokoro Vertical PC Transparent Okporo Ụzọ Ịgba Ọkụ Ọnụ ụzọ na-ekpo ọkụ eletriki eletrik nwere ọtụtụ narị pvc ọnụ ụzọ na-esi na tube ígwè. O nwere uru nke nghọta, mgbochi, mgbochi mmiri ozuzo, ájá na ájá. A na-ejikarị ọnụ ụzọ kpuchiri ọnụ ụzọ kpuchie ọnụ ahịa na nnukwu ụlọ ahịa. Ha dịkwa mma maka ọnụ ụzọ imeghe nke...
Okporo ụzọ ọnụ ụzọ PVC Okporo ụzọ ọnụ ụzọ Okporo Ụzọ Ọnụ Ọsọ Okporo ụzọ ọnụ ụzọ na-ekpuchi Okporo ụzọ kpoo ọnụ Okporo ụzọ n'ọdụ ụgbọ mmiri Okporo ụzọ ọnụ siri ike Okporo Ụzọ Ọnụ Ahịa Ọhụụ